ကလေးသူငယ်တွေ တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာတွေဟာ ဘာတွေလဲ? – BurmeseHearts
ကလေးသူငယ်တွေ တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာတွေဟာ ဘာတွေလဲ?
ကလေးသူငယ်တွေဟာ လူကြီးမိဘလို တန်ဖိုးကြီးတာ ၊ တန်ဖိုးနည်းတာကို ပိုင်းခြားလို့ သုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြသေးပါဘူး။ သူတို့ကြိုက်တဲ့အရာဟာ သူတို့အတွက် တန်ဖိုးကြီးအရာ တခုဖြစ်ပြီး သူတို့ချစ်တဲ့သူဟာ သူတို့အတွက် ဘဝမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သူပါ။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဆုံးရှုံးရဖန်များတဲ့အခါ ၊ မရရှိနိုင်တာ များတဲ့အခါ လိုချင်တာမရနိုင်တဲ့ဘဝ ၊ လုပ်မယူနိုင်တဲ့ဘဝကို သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လာပါတယ်။
ကိုယ်တန်ဖိုးထားချစ်ခင်သူရဲ့ မေတ္တာကို မခံစားရတဲ့အခါ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လာတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားချစ်ခင်သူရဲ့ ပစ်ပယ်မှုခံရရင် ဝမ်းနည်းအားငယ်စိတ်တွေ ဝင်လာတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားချစ်ခင်သူရဲ့ ဆူပူရိုက်နှက်မှုကို ခံစားရတဲ့အခါ ကျန်သူတွေ လုပ်လိုက်တာထက် ပိုခံစားရတယ်။ ပိုယူကျုံးမရဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူချစ်ခင်တွယ်တာသူတွေဟာ သူ့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကောင်း တိုင်တွယ်ပဲ့ပြင်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အထီးကျန်ခံစားမှုကို ဘယ်လိုကလေးငယ်တွေ ခံစားရတတ်သလဲ?
ကလေးသူငယ်တွေဟာ ဘယ်အခြေအနေမှာ အထီးကျန် ခံစားလာရသလဲ?
ကလေးသူငယ်တွ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်သလဲ?
BurmeseHearts	 Jul 29, 2015 0
မီးနေသည်တွေကို ဘာကြောင့် ထမင်းဆီဆမ်း ၊ ဟင်းခါး ၊ ငါးခြောက်ဖုတ်ပဲ…
တစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်တတ်သော နေထိုင်မကောင်းသည့် လက္ခဏာ အပိုင်း(၁)
(၁၄)လအရွယ် ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု